सिमिगाउँका १३० घरधुरीमा विद्युतीकरण - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
सिमिगाउँका १३० घरधुरीमा विद्युतीकरण
आवाज संवाददाता ६ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार
गौरीशंकर गाविसको १३० घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिएको छ । सिमिगाउँमा १२ किलोवाट क्षमताको सोलार प्लान्ट राखेर गाउँभरी विद्यतीकरण गरिएको हो ।
गाउँमा विद्युतीकरणका लागि सिमिगाउँको गौरीशंकर प्राविमा सोलार प्लान्ट राखिएको छ । त्यहीको एउटा कोठामा कन्ट्रोल रुम पनि छ । त्यहीबाट गाउँभरी विद्युत वितरण हुन्छ ।
गाउँमा विद्युतीकरणका लागि आइटी पोली नामक कम्पनी र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले लगानी गरेका छन् । आइटी पोलीले सोलार प्यानल लगायत सहयोग गरेको छ भने माथिल्लो तामाकोसीले पोल, केबल लगायत सहयोग गरेको छ ।
भुकम्प पीडितहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले अष्ट्रेलियन कम्पनीको सहयोगमा उक्त विद्युत प्लान्ट स्थापना भएको हो । विद्युतीकरणका लागि सिमिगाउँमा स्थापना गरेको सोलार प्लान्ट जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो हो । क्षमता १२ किलोवाटको भए पनि तत्काललाई ७ किलोवाट जडान भएको उनले बताए ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले विहीबारदेखि प्लान्ट सञ्चालनमा आएको बताए । आयोजनाका लागि करिब ७० लाख खर्च भएको छ । आयोजनाबाट गौरीशंकर गाविसको वडा नं. २, ३ र ४ लाभान्वित भएका छन् ।
तस्बिरः विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठको फेसबुकबाट